Ma dhabaain dahabshiil laga xaday ducument Muhiim ah sida uu qorey ....... | Somalisan.com Home
Ma dhabaain dahabshiil laga xaday ducument Muhiim ah sida uu qorey ....... 8/6/2012 6:55:00 PM
Dahir Alasow wuxuu Suxufiyiinta Soomaaliyeed ku leeyahay ,iga dhigta tusaale aad ku dayataan,ogaada inaysan bulshada u xiiso qabin tebinta warar maalmeedka dagaalka iyo gudbinta fikradaha siyaasiyiinta
Published On: Sunday, July, 29 2012 - 01:30:21 This post has been viewed
Warsaxaafadeed: Jawaab Hanjabaada Dahabshiil iyo Dib u milicsiga digniinahii Dahir Alasow 2006-2012
Anagoo ku hadleeyna magaca Waagacusub Media iyo Sunatimes waxaanu goáansanay inaan si kooban uga jawaabno hanjabaada nacasnimada,aqoondarada iyo qalqalka xambaarsan ee lagu faafiyay barta dahabshiil.com.
Warsaxaafadeedka Dahabshiil waxay ku sheegeen inay jiraan Website-yo dacaayad ku sameeyay Shirkadooda oo ay Maxkamad saareen kadibna la siiyay Digniin ku saabsan inay ka waantoobaan beeno iyo dacaayado laga fidiyo.
Jabkii iyo Fadeexadii Maamulaha Dahabshiil Abdirashiid Dhiigshiil ka raacday Maxkamadii uu Holland ku hor fariistay Milkiilaha Waagacusub Dahir Alasow waa mid ku cad Website-ka Maxkamadda Breda ee la soo dhigay Warbixintii xukunka taas oo qof walba uu si toosa uga akhrin karo halkaan.http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Breda/Nieuws/Pages/
Waa nasiib daro ka marqaati kaceeyso in Dahabshiil ka dhamaatay runtii ,hadii uu bulshada maanta u sheegay in Maxkamadda Holland digniin siisay Dahir Alasow ,Waagacusub iyo Sunatimes hasse yeeshee warka ay soo dhigeen Dahabshiil.com wuxuu noqon doonaa midbeesha Caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ku xaqiiqsadaan heerka la aamini karo Maamulka Shirkadda Dahabshiil.
Hadii awood ku faan guul lagu gaari karo waxaa dunida ku waari lahaa Nastigii Hittler.
Hadii Lacag, qaraxyo iyo cabsi gelin bulsho lagu hogaamin karo ama taageero lagu kasban karana Osama Bin Laden ayaa tusaale ugu filan Wiilka Dhiigshiil dhalay ee dunida mooda inuu dhaqaalahiisa yarku hogaamin karo.
Hadii aad barta Internet-ka ee Youtube.com ku qortid Dhiigshiil ama Dahabshiil waxaa kuu soo baxaya Maqal iyo Muuqaal Masuuliyiin,arday,Masaakiin ka cabanaya Shirkadda Dahabshiil,qaar cambaareeynaya iyo kuwa ku doodaya inuu naftooda,nabadgelyadooda halis ku yahay,
Hadii aad Google.com ku qortid Dahabshiil ama Dhiigshiil waxaa soo boodaya Warbixino dhiilo xambaarsan oo Warbaahinta Caalamka ay ka qoreen Shirkadda Dahabshiil halka sedex sano ka horna Google aysan ku jirinba warbixin ka dhana Dahabshiil.
Lacagta Bird & Bird ay siisay oo dhan 136,842.24 Pound,waxaa ka badan tan Lawyeradii guuldareeystay ee Eversheeds kaa qaateen waloow aan cadeeyntooda helin ,hadana waa suáale maxaad lacagtaas u siin weyday dadka tabaaleeysan ee ehelkaada ah.
Lacagta aad siisay Shirkadda Bell Pottinger ee aad ku dalbatay in Google First pages lagaa saaro waxay dhan tahay 40,400.31taasi maxaad ugu taageeri weysay xitaa Warbaahinta Saboolka ee gobolka aad ka soo jeedo,hadiise aad qaldantay maanta ma garwaaqsan tahay in Google wararkaada ka buuxaan,adna fadeexo kaliya kaa raacday.
Ma jirto Ceeb ka weyn,kalsooni daro ka xun,fadeexo soo marta Shirkad Ganacsi in dadkii Dahabshiil ka furtay Accounts-ka ama Bankiyada sirtoodii,macluumaadkoodii lagu faafiyo Internet-ka.
Ma jirto nacasnimo ka xun oo qof ku fikiro inuu bisha ama dayaxa sacab ku qariyo ,taas oo aan ula jeedno in gulufka Maamulka Dahabshiil ku dhamaaday inkirmo,been,hanjabaad iyo dafiraad.
Inaad qalqashid waxaa ka wanaagsan inaad isku kalsoonaatid laakiin malaha maad xaqiiqsan in bulshada kula socoto iskugu jiraan kuwa ,adiga kaa aqoon badan,kaa aqoonyar ama kugu aqoona.
Reer Dhiigshiilow hadaad inkirtaan Malaayiinta qof ee Magacyadooda iyo macluumaadkooda la soo dhigay Internet-ka in Database-kiina laga jabsaday ,mala dhihi karaa waxba idin lama ahan inaad dhaqaalahoodana inkirtaan.maxaa yeelay Kumanaan qof ayaa Website-kiina ka akhrisatay idinkoo dunida u sheegay inaad dabagal ku wadaan cidii jabsatay macluumaadkiina la faafiyay hadana Warbixintii ku qorneed English-ka ayaad ka saarteen Website-kiina ,oo waxaad ku bedesheen mid ku qoran Af Somali oo aad ku dafireeysaan jiritaanka sirta la idinka jabsaday.
Macaamiisha Milyanka qof ka badan ee Koontooyin xisaabeedkeey idinku aamineen la soo gelshay Internet-ka, Sidee qalbigoodu noqon kartaa hadeey akhriyaan inkirmadiina ,mase la dhihi karaa waxaad isticmaaleeysaa falsafadaha looga bartay Shirkadaha kici raba
.Halkaan ka akhrihttp://www.animegist.com/old//Somaleaks/Rsa.Banking.dbo.CLIENTS_sample.txt
Warbixintii English-ka oo aan Website-kiina ka daabacanay waxay saaran tahay Miiska Waagacusub iyo Sunatimes,anagoo saadaash eenu ahayd inaad ka saari doontaan si aad bulshada u qaladaan hasse yeeshee waxay dadku isweydiinayaan waxa idinku qasbaya inaad taasna ku qirataan in Database-kiina la jabsaday,tan Af Somaligana ku inkirtaan.
Hadii aan idin Xasuusino xisaabta maku darsateen in Warsaxaafadeedkiina English-ka faafiyeen Warbaahinta Caalamka,in Hayádaha UN-ka loo gudbiyayiyo inuu Google akhrinayo marka lagu search gareeyo,halka Warbaahintaad u dirteen dhamaantood wada faafiyeen.
Sal fudeedka idin qaaday ayaa sawir ka bixinaya in Shirkadu tiirar adag ku taagneeyn balse Somalida waxay ku maahmaahdaa HADAL WUXUU AMAAN YAHAY INTAADAN ORAN.
Dhamaan hab dhaqankiina marka la qiimeeyo waxay Xeeldheerayaashu qabaan in la joogo xilligii guuldaradiina hasse yeeshee malaga yaabaa in fashilkiina ay ka shaqeeynayaan kuwa idinla jooga oo qoob ka ciyaar ugu jira inaad martaan jidkii Qaran Express martay.
Inkastoo dadka badankiis la guuxayaan Gabaygii ahaa "BAADIDA NINBAA KULA DAY DAYI DAALNA KAA BADANE,OO IN LA HELAANA DOONI HEEYN,DAA''IN EBIDKIISE" hadana waa hubaal inay gurbaan beena idiin tumayaan nacamleeyayaal aan idinla xanuunsan doonin marka Shirkadiina kacdo.
DANTA DAHABSHIIL MAXAY TAHAY ?
Danta Dahabshiil waxay ku jirtaa inaad joojisaan guud ahaan hanjabaadaha aad ku heysaan Saxaafadda madaxabanaan,dadka Masaakiinta,maalgelinta aad siisaan kooxaha la idinku eedeeynayo iyo damaciina fogaaday ee ku milanka siyaasadda
,dhul boobka,laaluushka iyo burburinta Shirkadaha idinkula jira loolanka ganacsiga xorta ah.
ALLE SWT wuxuu quraankiisa ku yiri,hadaad igu shukrisid waan kuu siyaadinayaa,hadaad igu kufrisidna cadaabkeeyga waa mid daran " LA IN SHAKARTUM LA ASIIDA NAKUM,WAL IN KAFARTUM,WA INA CADAABA LA SHADIID" sidaas darteed waxay dantiina ku jirtaa idinkoo kibir qooqa ka waantoobo.
DULUCDA JAWAABTEENU MAXAY TAHAY.
Anagoo rumeeysan in dhamaan reer Dhiigshiil la taahayaan,qoomamo ka joogaan ,wejigabaxii iyo fadeexadii ka raacday Maxkamadda Breda ee Dalka Holland ,goáankii 8 Febaury 2010 ee loogu sheegay in la laalay dhamaan eedeymahii Dahir Alasow,uuna xor u yahay inuu shaqadiisa Saxaafadeed sii wato.iyadoo Dhiigshiilna lagu xukumay inuu maalmo gudahood ku bixiyo kharashkii xeerbeegta ee ganaaxa dacwo furtaha guuldareeysta.
Anagoo rumeeysan inuu hadalkiinu yahay QOF DAAD QAADAY CUMBO CUSKAY.xanuunkiina ugu weyna yahay in kiiskii Maxkamada, Dowladaha reer Galbeedka oo dhan feyl gareeysteen oo mar walba xaaladiina lala socdo.
Idinka iyo anaga oo wada og halkeey mareen dhamaan dadkii aad lacagta ku siiseen inay dilaan Dahir Alasow iyo Abdisalan Abdulle Yusuf ,tifaftirayaasha Waagacusub iyo Sunatimes.com.iyo shaqsiyaadkii fariimaha hanjabaada noo soo diray dhamaan.
Anagoo ku faraxsan in Suxufiyiin iyo Saxaafad hore idinkaga baqeeysay ogaadeen inaad cidna waxba ka qaadi karina,tusaalena ka dhigtay anaga.
Anagoo waaya aragnimo badan ka siyaasadsanay dagaalkiina,kuna yeelanay magac iyo miisaan.
Hadii aad kelya adeeg u leedihiin,Waxaan ku faraxsanahay inaad hanjabaadiina ka dhabeeysaan oo dacwad labaad furataan,maxaa yeelay meeshu maaha Burco,maaha Hargeysa ,maaha Afrika,kama shaqeeyo laaluush, halkaanu joognaa waa Yurub iyo North America.
Akhristayaasha ,Dhageystayaasha,Daawadayaasha ,taageerayaasha ku tixan Waagacusub,Sunatimes,halbeegnews,kulmiye Radio,Somalidiasporanews.com,Garqaad.com,Galmudugnews.com iyo Somali Channel Tv waxaanu laba laabi doonaa barnaamijyadeena ku saleeysan xaqiiqada,ku hadlida codka dadkaan codka laheyn,mana jirto cabsi aan ka qabno Dhiigshiil iyo Dhagax shiil toona.
Dahir Alasow wuxuu Suxufiyiinta Soomaaliyeed ku leeyahay ,iga dhigta tusaale aad ku dayataan,ogaada inaysan bulshada u xiiso qabin tebinta warar maalmeedka dagaalka iyo gudbinta fikradaha siyaasiyiinta,ganacsatada dalka burburiyay ee jecleeysanaya inay Canshuur laáan ku sii shaqeeystaan,xoolaha shacabkana xadaan.
Dacwadii ay Dhiigshjil igu oogtay waxaan ku noqday Wariye Caana ,waxay dacwadaas ii sahashay inaan ka mid noqdo Wariyeyaasha Midowga Yurub,waxaa gurigeeyga igu soo booqday,Casuumado ii fidiyay Diblomaasiyiin iyo Wariyeyaal waaweyn oo dunida 1-aad ka soo jeedo.
Shaqsi ahaan Dahir Alasow sanadkii 2006 ilaa 2009 waxaan noqday Wariyahii inta badan bulshada Soomaaliyeed ugu necbeed Wariyeyaasha Somalia u dhashay ,maxaa yeelay Waagacusub waxaan uga hadli jiray halista Mustaqbalka dhaw ee Maleeshiyada Al-Shabaab.
Kumanaan Somalia ayaa Emailo ,telefoono ii soo diri jiray iyagoo igu leh maxaa ku daba dhigay Mujaahidiinta Al-Shabaab,waxaad neceb tahay Islaamka,Gaalo raac ayaa tahay,Gaal ayaad tahay,basaas ayaad tahay,waa ku dileeynaa laakiin ma noqon qof ku niyad jaba waxyabahaas oo dhan.
Waagacusub wuxuu gaaray heer lagu naco wararka Al-Shabaab balse aniga intii u dhaxeeysay 2005 ilaa 2011 waxaan sii waday ka hadlida halista Al-Shabaab taas oo Waagacusub iyo aniga ka dhigtay Isha wararka sugan ee ay ku hirtaan cid walba,xitaa Kooxda Al-Shabaab maxaa yeelay macluumaadka aan heleeyno ayaa qof kasta ku qasbaya inuu booqdo.
Kumanaankii shalay i necbaa ayaa i jeclaaday maxaa yeelay waxay indhahooda ku arkeen halistii aan ka digayay ee Al-Shabaab.
Madaxweynaha Xilligaan ee Shariif Sheekh Ahmed oo xilligii uu Asmara joogay igu tilmaamay nin halganka Mujaahidiinta dhabar jibinayo,igu habaaray inaan gacmahaan wax ku qoro waayo ayaan sanado kadib maqlay isagoo ii duceeynaa.
Hada,Warbaahinta Somalia oo dhan ayaa Al-Shabaab xumaantooda ka hadasho,anigana waan ka nastay,waxaan qoraa kaliya Warbixino culus,oo ku saabsan dabagal.
2007 ilaa 2010 Waxaan si joogtaa uga hadli jiray Xawaaladii Burburtay ee Qaran Express taas oo Boqolaal Somalia igu canaanteen Warbixinadaan ka qori jiray.
Dadka waxaan u sheegi jiray inay sii shaqeeyn doonin macluumaadyo aan ogaaday darteed.
Sanadkii 2008 anigoo ku jira Kaam lagu magacaabo Appelscha ,oo qaxootinimo iskaga dhiibay dalka Holland ayey Postada iiga soo dhacday Warqad uu soo diray Lawyer ka socday Shirkadda Qaran Express,waxaana ku qornaa Hanjabaad uu iigu hanjabay inuu Maxkamad i saarayo.
Warqadaas Lawyer-ka oo dhowr bog ka kooban weligeey cidna uma sheegin ,ma tusin,waxaana ugu jawaabay Lawyer-kii soo diray,"waxaan aad u sugayaa inaad Maxkamad iiga yeertid"!?
Warbixinadii la xiriiray Qaran Express waxaan waday ilaa 2010-kii ,waxaana ka haray markii aan helay macluumaad ku saabsan in Albaabada loo laabi doono.
Dabcan,Warkeeygii ugu dambeeyay ee aan Waagacusub ku qoray waxaan ciwaan uga dhigay "Qaran Express oo galaafan doonta saamiga kumanaan Somali danyara"
Saamileeyda Shirkadda waan u qoray faahfaahinta laakiin kuma qasbi karin inay lacagtooda kala baxaan,waxaana hubaa in maanta kumanaankii qof igu xasuusanayaan xogtaan u gudbiyay maadama ay maanta badankood nool yihiin ,iyagoon xoolahoodii sheegan karin.
Dhibka ugu weyn wuxuu yahay qof ku nool Yurub ama Waqooyiga Amerika ,oo aan lacag sharciya Dowladaha ku ogeen ,uma dacwoon karo lacag uu Shirkad ku darsaday ama u taalay.
Somalida waxay lacagteey naftooda iyo eheladeeda u diideen ,ku aaminaan Shirkad uu leeyahay hal qof,oo aan damaanad laheyn sida Dahabshiil ama Shirkad ay leeyihiin koox danleeya,oo sharci qabtaa jirin.
2009 ilaa sanadkaan 2012 waxaa Waagacusub buux dhaafiyay warar iyo warbixino ku saabsan Shirkadda Dahabshiil ama Dhiigshiil taas oo dad badan u arkaan inaan dulmi ula jeedno,halka howlwadeenada Shirkadana u sheegeen bulshada dacaayad ku saabsan inaan dhaqaale ama lacag ka rabno.
Wararkeena Dahabshiil ma quseeyaan dhaqaalo raadin,siyaasad,qabiil ku nicid laakiin waxay u dhigmaan Wararkii aan ka qori jirnay Al-Shabaab iyo Qaran Express.
Waagacusub oo kaashanaya Warbaahinta madaxabanaan wuxuu Yoolkiisu yahay inuu bulshada gaarsiiyo macluumaad qarsoon oo dhaxalgala ,waxaana sii wadi doonaa difaacida danta guud ee Dalka,dadka iyo Diinta.
Anagoo ogin Wariyeyaasha iyo Warbaahinta madaxabanaan ee Somalia dhaqaalo daro iyo xaalad adag oo amaan xumo ku hoowl galaan hadana waa inay Laaluushka ,sandareerada yar ee Ganacsatada iyo danleeyda siyaasadeed ka doorbidaan danta guud ee bulshada maxaa yeelay waa tabta kaliya ee lagu badbaadin karo dalka,dadka iyo diinta,loogana bixi karo faqriga.
Sayid Cabdulle Xasan allaha u naxariistee,markii uu halganka xornimo doonka kula jiray gumeeystahii Ingiriiska ,waxay gumeeysiga iyo maangaabyadii Somalida u bixiyeen WADAADKII WAALNAA " The Mad Mullah" anigana amaan kama sugayo cadawgeeyga iyo kuwaan i garan laakiin waxaan qiyaasayaa inaan guuleeysan doono ,hadaan ka fogaado eex,musuqmaasuq,cadaalad daro iyo awood ku faan.
Jawaab Hanjabaada Dahabshiil iyo Dib u milicsiga digniinahii Dahir Alasow 2006-2012
Nagala Soo Xiriir: +252695576666/+252615576666//+252699907666 somalisan@hotmail.com / somalisan@gmail.com FAALLOOYIN VIDEOS Mareykanka oo diiday in la aaso meydka Taliyihii ciidamda sirdoonka Maamulka Jubba Ciise raaskaambiooni tan iyo inta ay kala baxayaan aalad wax basaasta oo jirkiisa ku rakiban . Ex Xildhibaan Saalax Nuux ( Badbaado) oo wareysi siiyey Idacad Alshabaab Taageerto eedeyn kululna dusha u saaray Turkia Britain Somaliland kana Hadlay arimo badan ( DHAGEYSO CODKA ) 80 Muwadiniin Soomaali ah oo sanadkani lagu diley dalka Koonfur Afrika iyo Magacyadooda ( DHAGEYSO HEEST SouAfrica ) VIDEO Ciidamada Ethioipia ee Shaarka loo Bedel Maxaa ka Imaan Doona ? Xasuuqii Jasiira iyo kacdoonkii iyo dhalashadii somaliland 1989 Magacyada iyo qabaaada dadkii a xasuuqay